News - Site na 2026, ahịa osisi nkewa ikuku ụwa ga-ahụ nnukwu uto
DBMR agbakwunyela akụkọ ọhụrụ akpọrọ "Ahịa Ngwa Ngwa Ngwa Ikuku", nke nwere tebụl data nke afọ akụkọ na akụkọ amụma. Tebụl data ndị a na-anọchi anya "nkata na eserese" gbasaa na ibe ahụ ma dị mfe nghọta nyocha zuru ezu. The ikuku nkewa ngwá ahịa nnyocha akụkọ na-enye a isi analysis nke ahịa ọnọdụ nke ikuku nkewa ngwá emepụta, gụnyere ahịa size, uto, òkè, na ọnọdụ, na ụlọ ọrụ na-eri Ọdịdị. Mgbe guzosie ike a zuru ụwa ọnụ ahịa, anyị kwesịrị ilekwasị anya na ahịa ụdị, nzukọ ọnụ ọgụgụ, obodo nnweta, ọgwụgwụ-ọrụ nzukọ ụdị, na nnweta ikuku nkewa ngwá ahịa akụkọ na North America, South America, Europe, Asia Pacific, na Middle East na Africa. Uto nke ikuku nkewa ikuku nke ahia bu ihe kariri site na uto nke mmefu R&D zuru uwa, mana ihe omuma ohuru na mmeghari aku na uba agbanweela ihe omuma ahia.
The ikuku nkewa ngwá ahịa nnyocha akụkọ enọ ndị ahịa nsonaazụ kacha mma, na akụkọ na-emepụta site na iji ike ụzọ na nkà na ụzụ ọhụrụ. Site na nkwupụta ahịa a, ọ dị mfe ịmalite ma bulie usoro ọ bụla nke usoro ndụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere isonye, ​​nnweta, njigide, na ịkpata ego. Akụkọ ahịa ahụ mere nyocha sara mbara banyere nhazi ahịa ahịa ma nyochaa akụkụ ahịa dị iche iche na ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ. Ghara ikwu, ejirila ụfọdụ eserese rụọ ọrụ nke ọma na akụkọ osisi nkewa ikuku iji gosipụta eziokwu na data n'ụzọ ziri ezi.
N'ime ndị isi asọmpi na-arụ ọrụ ugbu a n'ahịa osisi nkewa ikuku, enwere ole na ole Air Liquide (France), Linde (Ireland), Praxair Technology Co., Ltd. (UK), Air Products Co., Ltd. (USA), Messer Otu Co., Ltd. (Germany), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japan), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Canada), Technex, Astim (Europe), Bd | Sensọ GmbH (Germany), Toro Equipment (Europe), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Germany), Instrument & Supply, Inc. (United States) ), Jbi Water na Wastewater (United States), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (United States), Eco-Tech, Inc. (United States), Rcbc Global Inc (Germany) na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A na-atụ anya ka ahịa nkewa nke ikuku ụwa na-eto site na mbido atụmatụ nke USD 3.74 ijeri na 2018 ruo atụmatụ ọnụ ahịa nke USD 5.96 ijeri na 2026, yana mmụba kwa afọ nke 6% n'oge oge amụma nke 2019-2026. Enwere ike ịbawanye ụba ahịa ahịa na ụba chọrọ maka ngwaahịa fotovoltaic na ọwa ngosi ngosi plasma.
Iji tumadi ịghọta Ọnọdụ nke ụwa ikuku nkewa ngwá ahịa, anyị nyochara zuru ụwa ọnụ ikuku nkewa ngwá ahịa na isi n'ógbè nke ụwa.
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 emeela ka nsogbu dị na pipeline ụlọ ọrụ dum, ọwa ahịa na ọrụ ntinye ọrụ. Nke a etinyela nrụgide mmefu ego na-enweghị atụ na mmefu ụlọ ọrụ nke ndị isi ụlọ ọrụ. Nke a na - abawanye ọchịchọ maka nyocha ohere, ihe ọmụma banyere ọnụahịa na nsonaazụ asọmpi. Jiri ndi otu DBMR meputa uzo ahia ohuru ma were ahia ohuru ndi a amaghi. DBMR na-enyere ndị ahịa ya aka ịzụlite n'ahịa ndị a na-ejighị n'aka.